I Palazzi Arte B&B: igumbi suite kwinqaba yamandulo - I-Airbnb
I Palazzi Arte B&B: igumbi suite kwinqaba yamandulo
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguAntonella
I-Suite ligumbi eliphangaleleyo kwi-B&B eqhutywa lusapho, ekwisakhiwo senkulungwane ye-13 esinewotshi. Lo mhlaba ujikelezwe yimithi yomnquma kunye nezidiliya, inegadi enoxolo kunye nemisebenzi emininzi yobugcisa, njengoko ilikhaya lomkroli. Kumda ophakathi kweTuscany ne-Umbria, kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka eCortona naseMontepulciano kwaye kufutshane nechibi iTrasimeno, iqhagamsheleka ngokulula kwezona ndlela zihamba phambili zale nxalenye imangalisayo yaseItali: Siena, Arezzo, Valdorcia, Pienza, Montalcino, Assisi, Orvieto.
I-B&B eqhutywa yintsapho inamagumbi ama-4 aphindwe kabini afumanekayo ukulungiselela iindwendwe. Elona candelo lidala lendlu lisuka kwiXesha eliPhakathi kwaye kuyaziwa ukuba uSanta Margherita, umgcini wengcwele waseCortona, wayehlala apha ngenkulungwane ye-XIII. Indlu encinci yecawa iseyindawo engcwele. Umnini ngumkroli kwaye unokuwubona umsebenzi wakhe wobugcisa kuyo yonke indawo endlwini. Ipropathi ijikelezwe yeyona ndawo inomtsalane yeTuscan, enemithi yomnquma kunye nezidiliya, umgama nje omfutshane ukusuka kwiidolophu ezintle zaseCortona, Montepulciano kunye nechibi leTrasimeno. Ilali encinci ikude ngekhilomitha nje enye, inevenkile eluncedo kunye nebhari.
Igumbi le-suite ligumbi lokulala elikhulu elinombono, i-corridor kunye negumbi lokuhlambela elibanzi neliqaqambileyo elinebhafu.
Usapho luya kukuvuyela ukukubonisa umbono omangalisayo ovela kwinqaba kwaye kuya kukunceda ukuba ubhukishe i-trattoria eqhelekileyo okanye ufumane umvelisi omncinci wendawo apho uthenge khona iVino Nobile di Montepulciano okanye i-pecorino cheese engcono kakhulu.
Isidlo sakusasa saseTaliyane sibandakanyiwe kwireyithi yegumbi. Izibonelelo zekofu kunye neti. Ukusetyenziswa kwefriji.
Iinkonzo ezongezelelweyo ngesicelo: ukucoca imihla ngemihla, isidlo sakusasa saseTuscan seNdabuko kunye neemveliso zasekhaya, isidlo sakusihlwa kwinqaba , ii-aperitifs ezinewayini ehlwahlwazayo "ezimbini kuphela" kwinqaba (i-honeymoon ekhethekileyo). Isifundo sokupheka esilandelwa sisidlo sinokubhukishwa kwi-agriturismo ekufutshane.
Akukho moya womoya emagumbini, kuphela abalandeli. Izikrini zeengcongconi.
Kuvulwa nge-1 ka-Epreli ukuya kwi-31 ka-Okthobha
Siyi-B&B enelayisensi kwaye sifuna ukubhalisa iindwendwe zethu, ke nceda unikeze incwadana yakho yokundwendwela okanye i-id xa ungena.
Nceda ubhukishe nayiphi na inkonzo eyongezelelweyo kwangaphambili.
Irhafu enye ye-euro yabakhenkethi ngomntu ngamnye ngosuku ekufuneka ihlawulwe ngemali xa ihamba.
I-Suite ligumbi eliphangaleleyo kwi-B&B eqhutywa lusapho, ekwisakhiwo senkulungwane ye-13 esinewotshi. Lo mhlaba ujikelezwe yimithi yomnquma kunye nezidiliya, inegadi enoxolo kunye nemisebenzi emininzi yobugcisa, njengoko ilikhaya lomkroli. Kumda ophakathi kweTuscany ne-Umbria, kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka eCortona naseMontepulciano kwaye kufutshane nechibi iTrasimeno, iqhagamsheleka ngokulula kwezona ndlela ziha…
5.0 (iingxelo zokuhlola 127)
Le yindawo ecwangciswe kakhulu, kanye embindini weCortona kunye neMontepulciano, kumgama omfutshane ukusuka echibini leTrasimeno. Kulula kakhulu ukufikelela (iikhilomitha ezili-18 ukusuka ku-A1 eRome ukuya kwi-Florence motorway, ukuphuma kweValdichiana) inokuba sisiqalo esigqibeleleyo sohambo lwemihla ngemihla kunye nendawo yokuphumla xa uqhuba phakathi kweRoma neFlorence.
Kwikhilomitha enye idolophana encinci kunye nevenkile, kwi-2 km i-trattoria enhle kunye ne-agriturismo yokutya kweefama.
Umbuki zindwendwe ngu- Antonella
Usapho luhlala endlwini kwaye luyafumaneka ukukunika ulwazi malunga nommandla, icebisa iindlela ezihamba phambili kunye nohambo, kwaye ilungele ukukunceda ubhukishe iindawo zokutyela, ukungcamla iwayini, iiklasi zokupheka okanye nayiphi na eminye imisebenzi. UMassimo ngumkroli kwaye unokumbona esebenza kwindawo yakhe yokusebenzela kwaye mhlawumbi ukwakrola isiqwenga somthi womnquma kunye Ikona yokupeyinta, iincwadi kunye noncwadi oluthetha ngalo mmandla ziyafumaneka kwiindwendwe. Isidlo sakusasa saseTaliyane sibandakanyiwe kwireyithi yegumbi.
Inkonzo eyongezelelweyo ngesicelo: ukucocwa kwansuku zonke, isidlo sakusasa saseTuscan esiqhelekileyo kunye neemveliso zasekhaya, isidlo sakusihlwa kwinqaba, ii-peritifs zothando ezimbini (i-honeymoon ekhethekileyo).
Isifundo sokupheka ngokungekho sikweni silandelwa sisidlo sangokuhlwa sinokubhukishwa kwifama ekufutshane.
Usapho luhlala endlwini kwaye luyafumaneka ukukunika ulwazi malunga nommandla, icebisa iindlela ezihamba phambili kunye nohambo, kwaye ilungele ukukunceda ubhukishe iindawo zokutye…